रामशरण महतलाई लक्षित गरी नुवाकोटमा एम्बुस विष्फोट =यसरी जोगिए – Sabaikoaawaj.com
रामशरण महतलाई लक्षित गरी नुवाकोटमा एम्बुस विष्फोट =यसरी जोगिए
शुक्रबार, मंसिर १, २०७४ 1:26:10 PM	मा प्रकाशित
१ मंसिर, काठमाडौं ,
कांग्रेस नेता डा. रामशरण महतलाई लक्षित गरी शुक्रबार नुवाकोटमा एम्बुस विष्फोट भयो । बिष्फोटनमा परी ५ जना कांग्रेस कार्यकर्ता घाइते भए ।अहिले उनीहरुलाई थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको छ । एम्बुसबाट करिब डेढ सय मिटर अगाडि डा. महतको गाडी थियो ।
अक्सर गाडीको लस्करको बीचमा भीआईपीको गाडी हुने गर्छ । सायद आक्रमणकारीले पनि त्यही सोचेर बीचको गाडीलाई धरापमा पारेका थिए ।तर, शुक्रबार डा. महत सबैभन्दा अघिल्लो गाडीमा थिए । र, जोगिए ।घटनाका प्रत्यक्षदर्शी नुवाकोटबाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार रमेशकुमार महतसँग अनलाइनखबरले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ ।
ककनी–७,चतुरालेमा चुनावीसभा थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्न डा. रामशरण महतसहितको टोली त्यसतर्फ जाँदै थियो । उहाँको गाडी सबैभन्दा अगाडी थियो ।पछाडि लस्करै तीन वटा गाडी थिए । डा. सा’बको गाडी र पछाडिको गाडीबीच डेढ सय मिटर जतिको दुरी थियो । उहाँको गाडी थोरैले बच्यो ।
काउलेथामा पुगेपछि हामी चढेको गाडीलाई लक्षित गरी बम विष्फोट भयो, ठूलो आवाजसहित । विष्फोटपछि गाडी उत्तानो परेर पल्टियो ।छाडिको गाडीमा रहेका हामी विष्फोट लगत्तै गाडीबाट निस्कियौं । दुर्घटना गाडीमा हेर्दा ५ जना घाइते थिए । अहिले उनीहरुलाई थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौंको ग्राण्डी अस्पतालमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।
प्रकाशित मितिः शुक्रबार, मंसिर १, २०७४ 1:26:10 PM